Arday Tigree ah oo la hubeeyay.
Tareenka Itoobiya iyo Jabuuti oo hawlgab qarka usaaran.
Itoobiya oo kharashka ugu badan ku bixisa gaashaandhiga.
Iskuulo badan oo la xidhay iyo kacdoonkii ardayda oo ka sii daray
Banaanbax Itoobiya kadhan ah oo Baladweyne ka dhacay.
Banaamujkii aragtida halgamaaga iyo suugaan halgameed.
Wariyaha Wakaaladda Wararka Ogadeniya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya inuu aad u sii kordhay kacdoonkii ardayda ee lagaga soo horjeeday taliska Addis Ababa, taasoo keentay in ardayda Tigreega ah ee wax ka barta kulliyada beeraha ee Jaamacadda Ambo ay hub la soo baxeen mar ay rabshado halkaas ka billaabmeen.
Warar aanu ka helay ilo muhiim ah ayaa sheegaya in la hubeeyay dhamaan ardayda Tigreega ah ee wax ka barata kuliyadaha iyo Jaamacadaha Itoobiya ee kala duduwan, taasoo cadynaysa kalsooni darrada ku habsatay xukuumada dheel-dheelliga ah ee Meles Zenawi.
Bilihii ugu denbeeyay waxaa dalka Itoobiya ka soo cusboonaaday gadoodkii ay ardaydu samaynayeen ee ay kaga soo horjeedeen cadaadiska ay xukuumadda Addis Ababa ku haysa dadwaynaha rayadka ah.
Toddobaadkii hore ayay iska hor-imaadyo ballaadhani dhexmareen ardayda Oromoda iyo ciidamada nabad sugida ee Itoobiya, iska-hor-imadyadaas oo ka dhacay Jaamacada Haramaaya, ayaa lagu dhaawacay 16 arday. 24 arday oo iyaguna wax ka baranayay machadka macalimiinta ee Ktobe ayaa toddobaadkii hore waxbarashadoodii laga eryay.
Tareenka Itoobiya iyo Jabuuti oo hawlgab qarka u saaran.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in dhibaato aad u wayn oo xaga dhaqaalaha iyo dayac tir la’aani ba’ani ay ku habsatay Tareenka ka dhex shaqeeya Itoobiya iyo Jabuuti.
Tareenkan ayaa waxa uu labadan wadan ka dhex shaqynayay mudo ka badan 108 sano, balse wax hurumar ah ma aanu keenin muddadii uu shaqaynayay.
Warar xog-agaal ah ayaa sheegaya in, si loo badbaadiyo shaqada Tareenkan, la rabo in lagu wareejiyo hatiilayaal gaar ah oo iyagu maal gashada, isla markaana dayactir ku sameeya.
Waxaa la wada-ogsoon yahay in xukuumadda Meles ay la wareegatay sharikado aad u tira badan, hasa yeeshee ayna jirin wax horumar ah oo ay dawladu ku samaysay shirkadihii ay la wareegtay khasaaro mooyaane.
Dadka arimaaha dhaqaalaha ee Itoobiya u dhuun duleela ayaa sheegaya inuu musuq-maasuqu meel walba gaadhay oo loo kala baratamayo sidii loo kala boobi lahaa hantida dadwayanaha iyo tan dawlada labadaba.
Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadeniya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in khuburo dhaqaalaha ku takhasusay ay caddeeyeen in dhibaatooyinka dhaqaale ee Itoobiya haysta ay yihiin kuwo la xidhiidha bajadka wasaarada gaashaandhiga oo aad u badan.
Warku wuxuu kaloo intaa raaciyay in aad loola yaabo dawlad sabool ah oo Itoobiya oo kale ahi in ay sannad walba ku bixiso gaashaandhiga lacag dhan 792 Malyuun oo Birr.
Iyadoon maalgalin sidaa ah ku samaynin waxaaybaha nolosha aasaasiga u ah, sida caafimaadka oo ay u qoondaysay sanadkii 82 Malyuun oo Birr,halka ay waxbarashada uga qoondaysay 67 Malyuun oo Birr oo kaliya.
Iskuulo badan oo la xidhay iyo kacdoonkii ardayda oo ka sii daray.
Wararka naga soo gaadhaya magaalooyin kala duduwan oo ka tirsan gobolka Oromia ayaa sheegaya inuu kacdoonkii ardaydu aad u sii kordhay. Waxayna Dagaalo ku dhexmareen ardayda iyo ciidamada Itoobiya dugsiga sare ee Jarrati oo ku yaala gobolka bari ee Walaga waxaana iska hor imaadkaas ku dhintay hal arday.
Warku waxa uu intaa raaciyay in la xidhay dugsiyo sare oo aad u tira badan oo ku yaalla bariga Walaga iyo bariga Shawa. Dugsiyadaas la xidhay waxaa ka mid ah:
1. Dugsiga sare ee Jarati
2. Dugsiga sare ee Jadheera
3. Dugsiga sare ee Shambo
4. Dugsiga sare ee Gidha Gimara Milo
5. Dugsiga sare ee Finjara
6. Dugsiga sare ee Burqa Jifa
7. Dugsiga sare ee Gamo gudhaqala
8. Dugsiga sare ee Girisa
Warku wuxuu kaloo intaa raaciyay in macalimiin aad u tira badan iyagana la xidhay, waxayna xukuumadda Wayaanuhu xidhayga macalimiintan sabab uga dhigtay inay iyagu ka danbeeyaan kacdoonkan ardayda , laakiin warar xog-ogaal ah ayaaa sheegaya in loo xidhay oo kaliya in macalimiintaasi ay u dhasheen qowmiyada Oromada.
Warar kale oo aanu ka helay ilo muhiim ah ayaa iyana sheegaya inay ciidmada Iihadhigtu ay dhakhaatiirta ka shaqaysa Isbitaalka magaaalada Naqmte ku amreen inayna dawaynin ardayada kacdoonnadaas lagu dhaawacay.
Bannaanbax Itoobiya ka dhan oo Baladweyne ka dhacay.
Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee soomaaliya ayaa sheegaya in banaanbax aad u ballaadhan oo lagaga soo horjeedo xukuumadda Itoobiya uu halkaas ka dhacay. Banaanbaxaan waxaa lagu muujinayay sida looga xun yahay xadhiga ay xukuumadda Itoobiya xidhxidhay xubno ka tirsan masuuliyiinta Gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaas.
Dadwaynihii bannaanbaxaas isugu soo baxay waxay cadho wayn ka muujiyeen xadhiga sharci darrada ah ee xukuumadda Itoobiya ay masuuliyiintaas u gaysatay, waxayna ka dalbeen inay sida ugu dhakhsaha badan u soo dayso, iyadoon wax shuruud ah sii dayntooda ku xidhin. Xukuumadda Itoobiya waxay muddo bil ka badan xabsiga ku haysaa guddoomiyihii magaalada Baladweyne Aaden Garaase iyo odayaal dhaqameed kale, mana ayna sheegin sababta ay xabsiga ugu hayso.